banaadir – Page 3 – Banaadir Times
Home Articles posted by banaadir (Page 3)
Cumar Filish oo eedeyn kulul u jeediyay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya
By banaadir 8th July 2021 No comment
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna duqa Caasimadda Cumar Maxamuud Maxamed ( Filish) ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay caqabad ku heeyso Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadir ee dhawaanl agu wareejiyay Maamulka gobolka Banaadir. Waxaa uu sheegay in wareejintaas ficil ahaan aysan dhaqan gelin,isla markaana uu rajeeynayo in waxaas oo dhan ay dhamaan
Puntland oo ka shirtay amniga degaannadeeda Go’aana soo saartay
Ku-simaha Madaxweynaha Ahna Madaxweyne Ku-xigeenka Dowlad Goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa Shir-guddoomiyay Shirka Golaha Wasiirada Puntland, kaas oo ka qabsoomay magaalada garoowe. Shirka ayaa todobaadkan looga hadlay Amniga, Maamul Wanaaga, Xaalada Degmooyinka iyo Dhismaha goleyaasha deegaanka ee Puntland iyo qodobo kale. Ku-simaha Madaxweynaha Ahna
Mid kamid ah la-taliyeyaasha Farmaajo oo laga soo celiyay Garoonka Kismaayo
Wararka laga helayo Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayan in Maanta garoonka Kismaayo laga soo celiyay diyaarad siday la-taliyaha arrimaha doorashooyinka ee Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo lagu Magacaabo Cabdi Cali Raage. Diyaarada oo ka ambabaxday magaalada Muqdisho ayaa markii ay ka
Puntland oo Galmudug gaarsiisay Gurmad la xiriira la dagaalanka Al-Shabaab
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa Maamulka Galmudug oo uu matalayo Maamulka Degmada Gaalkacyo Galmudug ku wareejiyay bilowga Taakulada Puntland uga qayb qaadanayso la Dagaalkanka Al-Shabaab ee Deeganada Bacaadwayne iyo Wisil. Munaasibad ka dhacday Gaalkacyo ayaa waxaa goobjoog ahaa Gudoomiye ku Xigeenka Gobolka Mudug, Duqa Degmada
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Puntland ayaa shaacisay in Maanta oo Khamiis ah ay shaacin doonto Natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare oo ay Wasaaraddu qaaday. Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Waxbarashada Puntland ayaa la ogeeysiiyay Guddoomiyeyaasha Waxbarashada ee heer gobol iyo heer degmo, maamuleyaasha dugsiyada sare ee Puntland,